ज्यूँदोमा भर्नै लिएनन्, लाश बनेपछि स्वाव सङ्कलन « Loktantrapost
ज्यूँदोमा भर्नै लिएनन्, लाश बनेपछि स्वाव सङ्कलन
एम्बुलेन्समा पदम राई ।
विराटनगर, १० साउन । अस्पतालले कोरोना आशङ्कामा भर्ना नलिएपछि उदयपुर कटारी–५ का २३ वर्षीय पदम राईको एम्बुलेन्समा वरपर कुदाउँदा कुदाउँदै मृत्यु भएको छ । उनको मृत्युपछि स्वाव सङ्कलन गरिएको छ ।
विराटनगरका ठूला अस्पतालले उपचारका लागि लिन नमान्दा उदयपुरबाट ल्याइएका राईको अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो ।
उपचारका लागि लिएर आएका श्रीमती र बहिनी पीडाले बेहोश ।
डा. दासले अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन वरिष्ठ फिजिसियन डा. दीपक सिग्देलले कोशीमा उपचार सम्भव नहुने भन्दै धरान लैजान सुझाव दिएको बताए ।
मृतकमा कोरोना सङ्क्रमण थियो थिएन भन्ने कुरा स्वाबको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै भन्न सकिने उनले बताए । दासले स्वाब परीक्षणलाई भने प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
(अन्नपूर्ण पोस्टको आधारमा)